Shina Mini marina mahitsy 14 loha milanja multihead milina ho an'ny orinasa mpamboly fangaro amam-bary sy ny mpanamboatra | Lanja mahay
Mini avo lenta 14 loha mpandanja maro loha ho an'ny rongony voa dite
Mpandanja lohan'ny Mini 14 miaraka amina hopper 0.5L, manana fahamendrehana avo kokoa noho ny lohan'ny 14. Afaka lanja ny dite, ny voa, ary ny cannabis.
Rafitra fanaraha-maso: Ny fifehezana tsotra
120 kitapo / min
Efijery mikasika ”7”
Ny ambaratonga kely 14 dia mety amin'ny dite, masomboly, sakay sns ... Ireo karazana vokatra ireo dia mangataka ny tena marina mba hitazomana ny vidiny.
• Hopper 0,5L na 0,3L aza ho an'ny vokatra kely.
• Rafitra fanaraha-maso birao modular miorina amin'ny efijery mikasika.
• Ny endri-panamboana tsiro samihafa amin'ny endriny samihafa.
• Fakan-tsary azo alain-tahaka eo an-tampon'ny mavesatra noho ny fanaraha-maso ny fampisehoana mihazakazaka.
Previous: Masinina milina fonosana tray denester
14 ny lohany
milina famonosana milanja maro loha